I-FÖRNUFTIG isicoci somoya esisezantsi se-IKEA | Iindaba zeGajethi
I-FÖRNUFTIG isicoci somoya esisezantsi se-IKEA
UMiguel Hernandez | 17/03/2021 15:00 | ngokubanzi, Reviews
Izicoci zomoya ziye zaba yimveliso efunwa kakhulu, zininzi iimveliso ezingene ukuze zizibeke kwindawo yentengiso yezi mveliso, nangona kunjalo, ibingumbandela wexesha ngaphambi kokuba ifanitshala enkulu yaseSweden ifike idemokhrasi kwimveliso emiselwe ubekhona kumakhaya amaninzi nangakumbi.
I-IKEA isungule i-FÖRNUFTIG, ixabiso lokucoca umoya elinexabiso elinamandla kunye neefilitha ezingabizi kakhulu, silihlalutye nzulu. Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba kutheni le mveliso ye-IKEA ingangoyena mntu uthengisa kakhulu kwaye ume kwiimveliso ezibiza kakhulu.
Njengakwamanye amaxesha, sigqibe kwelokuba silupheleke olu hlalutyo luneenkcukacha kunye nevidiyo apho uya kukwazi ukubona ukungatyhileki kwesihlambululi somoya IKEA, kodwa ngakumbi, siza kukubonisa ukuba isebenza njani, ungazitshintsha njani izihluzi kwaye kunjalo zonke iinkcukacha ezinje ngenqanaba lengxolo elinakho ukwenza. Ke Sicebisa ukuba ujonge ividiyo kwaye uthathe ithuba lokubhalisela itshaneli yethu, apho siza kuqhubeka nokufaka uhlalutyo olunomdla kakhulu malunga neemveliso zasekhaya eziza kwenza ubomi bakho bube lula.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Kwindlela yokwenyani ye-IKEA
2 Uluhlu lweefilitha kunye nomthamo wokuhlanjululwa
3 Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye namanqanaba engxolo
Uyilo kunye nezixhobo: Kwindlela yokwenyani ye-IKEA
Ukuba kukho into esebenzayo musa ukuyichukumisa, kwaye yinto leyo I-IKEA icace gca malunga noyilo kunye nezinto zezo mveliso ezingadibaniyo nje nezinto zefanitshala. Yonke into ezenzekelayo ekhaya, isandi okanye iimveliso zegadget zixhomekeke kwiplastiki efanayo, iisheyinti ezifanayo kunye noyilo olufanayo, kwaye oko kusinceda ukuba senze imeko emanyeneyo kunye neempawu. njengoko ubona kuphononongo lwethu lwezibane kunye nezithethi ezenziwe yi-IKEA kunye noSonos. Kule meko bayamkelwa, kodwa kwinqanaba elincinci lokumangaliswa.
Ubungakanani: X x 45 31 11 cm
Ubunzima: 3,92 Kg
Sibheja kwiplastikhi emhlophe okanye emnyama ukuze ihambelane nomthengi kunye nepaneli engwevu yempahla ngaphambili, ekulula ukuyisusa. Zonke ezi zinto zibonelela ngokulula, ukuxhathisa kunye nokukhanya kwimveliso, kude nokukhangela imvakalelo premium, into abayifunayo kukulungelelanisa ixabiso kunye nokuqina kwayo. Emuva sinezixhasi, kwaye isixhobo sokucoca umoya se-IKEA sinokubekwa ngokuthe nkqo nangokuthe tye, iankile eludongeni okanye iphatheka ngokupheleleyo ngokudibanisa nesiphatho sayo senayiloni kunye nenkxaso yonyawo ebandakanywe ngokupheleleyo ebhokisini kunye nokuthelekisa umbala wemveliso.
Ibhokisi inekhadibhodi esebenza njengamanqaku okuyi-anchor eludongeni (ungayilahli kude)
Zombini iindawo zokukhaba (ezifakiwe) kunye nesiphatho senayiloni ziyaqwalaselwa
Zombini izibambo zenayiloni kunye nenkxaso yeenyawo zenziwe ngokupheleleyo Isuswe, eya kuthi iququzelele utshintsho lwembono ngokokuhombisa. Ngasemva siya kuba nesikhokelo esidityanisiweyo sekhebula esiya kusivumela ukuba sisinike izikhundla ezahlukeneyo ngaphandle kwesidingo sokubona iintambo ezijinga eludongeni. Le ntambo, kwelinye icala, inesisa kwaye ineadaptha yamandla ethile kunye nophawu lwentengiso.
Uluhlu lweefilitha kunye nomthamo wokuhlanjululwa
Kule meko isicoci somoya I-FÖRNUTFIG evela kwi-IKEA Ingasetyenziselwa iifilitha zayo ezimbini ngaxeshanye, okanye ngecebo lokucoca ulwelo eliphambili. Kungenxa yokuba enye yazo ibandakanyiwe kwiphakheji kwaye enye iya kuthengwa njengokhetho ukuba sinqwenela. Ezi ziifilitha ezimbini ezenza i-IKEA yokucoca umoya
Isihluzi se-HEPA 12: Sinecebo lokucoca ulwelo elinobungakanani obubonakalayo, esi sihluzo sithatha i-99,95% yamasuntswana afakwa emoyeni afana ne-pollen, inokusebenza kakuhle ukuya kuthi ga kwi-PM2,5, oko kuthetha ukuba igcina amasuntswana amakhulu kune-2,5 nanometer. Oku kuya kuthengwa ngokwahlukeneyo ukusuka kwi-5 euro ngokuthe ngqo kwi-IKEANangona kunjalo, iyunithi ifakiwe kwiphakheji.
Icebo lokucoca ulwelo gas: Esi sisihluzo esithile ngakumbi kwaye siyilelwe ukunciphisa ubukho bevumba kunye nomsi, endaweni ngenjongo yokudala imvakalelo yococeko nococeko emoyeni, kodwa ngaphandle kokugcinwa kwamasuntswana. Esi sihluzi siza kuhlala sinophawu "olongezelelweyo", yiyo loo nto ithengiswa ngokwahlukeneyo. ukusuka kwi-10 euro nakwiivenkile ze-IKEA. Oku kuhlambulula umoya ngokususa ezahlukeneyo izinto ezingcolisa umoya ezifana neeVOC kunye ne-formaldehyde.
Isixhobo siya kusebenza kwimfuno, oko kukuthi, kuya kufuneka siyisebenzise. Ayinayo nayiphi na inkqubo yohlalutyo lomoya okanye izilumkiso ngaphaya kwesalathiso se-LED semeko yokucoca izihluzi kunye neqhosha lokusetha kwakhona emva kwekhava elingaphambili. Nje ukuba kucace oko, sifumana amanqanaba amathathu ococeko ngevili phezulu. Kwimeko yokusebenza kwamandla aphezulu, Umgangatho wokukhutshwa komoya okhululekileyo wamasuntswana (ixabiso leCADR) yi-130 m3 / h.
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye namanqanaba engxolo
Amanqanaba engxolo aya kuxhomekeka ngqo kwinqanaba lamandla elabelweyo, kwinqanaba elincinci ingxolo iphantse ingabonakali (inokubonwa kwividiyo engentla), nangona kunjalo, inqanaba lengxolo yamandla aphezulu liyafana nelo le fan yendabuko kumandla asezantsi. Ke ngoko, inqanaba elincinci livumela ubomi obuqhelekileyo bemihla ngemihla kwaye nokulala nalo kusebenze, hayi kwinqanaba eliphezulu, elibonakala lenzelwe imeko yomsi okanye umungu ogqithisileyo. Oku iyakunceda ukuphucula impilo kunye nobomi bemihla ngemihla babantu abaneempawu zomzimba.
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kwesi sisulungekisi sivelisa ukusetyenziswa kwemihla ngemihla phakathi kwee-watts eziyi-2,5 no-19 incinci kakhulu, ke akufuneki ukuba sizikhathaze ngeli candelo. Kufuneka iqatshelwe ukuba intambo yoqhagamshelo inesisa kwaye isiphatho senze ukuba kube lula kakhulu kum kwiimvavanyo zam ukuyihambisa ngamagumbi ahlukeneyo. Ukusetyenziswa kwemizuzu engama-45 kwigumbi elinamacebo amathathu okucoca kuphelisa ngokupheleleyo amavumba amabi kusasa okuqhelekileyo, Ngokufanayo, umsebenzi ofanayo ekhitshini ulisusile ngokupheleleyo ivumba lokutya. Nangona kunjalo, ukwazi ngokweenkcukacha iziphumo zayo malunga nomungu kunye namanye amasuntswana kuya kufuneka ukuba uhlalutye umoya ngexesha lokwenyani, kwaye eso sisitshixo sexabiso laso elihlengahlengisiweyo.
Akuthandabuzeki IKEA buyela ku qhuma Imakethi yegajethi yasekhaya ethandwayo, isicoci somoya sizibonakalisa sanele kwaye sibonisa uyilo lobuhlobo, luyenza I-euro ezingama-59 kuphela iba lukhetho lokuqala lwabathengi abaqhelekileyo benkampani yaseSweden.
Ithunyelwe nge: 17 Matshi we2021
Utshintsho lokugqibela: 14 Matshi we2021
Izinto ezaziwayo kunye noyilo
Uluhlu lwecebo lokucoca ulwelo kunye nokusebenza ngokucoceka
Ngaphandle komhlalutyi womgangatho womoya
Intambo yonxibelelwano iyahambelana
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-FÖRNUFTIG isicoci somoya esisezantsi se-IKEA